Vejer de la Frontera, mara mma obodo mara mma na mpaghara Cádiz | Akụkọ Njem
Luis Martinez | | Spain obodo
Vejer de la Frontera bụ obodo mara mma na mpaghara Cádiz. Otutu n’ime ya di n’elu ugwu egbutu Osimiri Barbate, nke na-enye gị echiche pụrụ iche nke ma mpaghara nke La Janda yana oke osimiri dị nso nke ụsọ oké osimiri Cadiz.
Ọ bụrụ n’ikpebie ịga leta Vejer de la Frontera ị ga-ahụ otu n’ime ihe ndị kachasị mma obodo ocha n'ógbè gị. Ma ezi monumental nketa, na-enwekwa gastronomy na obi ụtọ baths na osimiri atlantic na nso nso osimiri nke El Palmar. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu Vejer de la Frontera nke ọma, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ akwụkwọ.
1 Ihe ị ga-ahụ na Vejer de la Frontera
1.2 Nnukwu ụlọ nke Vejer de la Frontera
1.3 Chọọchị nke Onye Nzọpụta Chineke
1.4 Hermitage nke Nwanyị anyị nke Oliva
1.5 Ventlọ ebe obibi nke ndị na-eche echiche
1.6 Oflọ Mayorazgo
1.7 Obí nke Marquis nke Tamarón
1.8 Plaza de España, etiti akwara Vejer de la Frontera
1.9 Igwe ikuku
1.10 Ọwa mmiri nke Santa Lucia
1.11 Gburugburu Vejer de la Frontera
2 Kedu mgbe ọ ka mma ịga Vejer de la Frontera
3 Otu esi aga Vejer de la Frontera
Ihe ị ga-ahụ na Vejer de la Frontera
Ekwuwaala obodo Cadiz Mgbanwe nke Artistical Historical na bụ akụkụ nke netwọk nke Obodo Kachasị Mara Mma na Spain, ihe niile ga - eme ka ị mata ihe ncheta ị nwere ike ịchọta na Vejer. Ka anyị gosi gị ha.
Obodo Cádiz na-echekwa ezigbo akụkụ nke mgbidi ochie ya, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX. Ọ gbatịrị ruo ihe dị ka kilomita abụọ ma gbasaa mbara ala dị hectare anọ. Ọ bụrụ n’ị gafere ya, ị ga-ahụkwa ibo ụzọ ndị jere ozi dị ka ụzọ Vejer. N'ime ndị a, arches nke Villa, Sancho IV, Puerta Cerrada na de la Segur.
N'agbanyeghị nkwenye na aha, ndị bastion nke Segur O nweghi ihe jikọrọ ya na ọnụ ụzọ ikpeazụ a, mana na nke Villa, nke bụ isi. N'ihi nke a, e wuru mgbidi a na-eche nche na ebumnuche nke ịchịkwa ọnụ ụzọ Vejer.
Ọnụ ụzọ ámá nke Segur
N'otu aka ahụ, mgbidi ahụ na-echekwa ụlọ elu abụọ. Na nke Mayorazgo o del Homenaje na-echekwa belfry nke ụlọ ụka na-efu efu ma nye gị echiche dị ebube banyere ọnụ mmiri Barbate. Maka akụkụ ya, Towerlọ elu Corredera jere ozi iji nyochaa ma kwukọrịta Medina Sidonia site na ihe ịrịba ama.
Nnukwu ụlọ nke Vejer de la Frontera
Ọ bụ akara ngosi ndị ọzọ nke obodo Cadiz. Ebube ya malitere na narị afọ nke XNUMX ma na-achịkwa obodo ahụ site n'akụkụ ya kachasị elu. Ọ nwere patio abụọ, isi na ogwe aka, tinyekwara mgbidi crenellated na ọnụ ụzọ ịnyịnya nke e dere alfiz. Na narị afọ nke XNUMX ọ rụrụ ọrụ dị ka ebe obibi maka Onye isi nke Medina Sidonia, onyenwe Vejer.
Chọọchị nke Onye Nzọpụta Chineke
Ọ bụ ụlọ nsọ nwere atụmatụ basilica, nke nwere ike ịbụ nke e wuru n’elu foduru nke ụlọ alakụba ochie. E wuru ya n’agbata narị afọ nke iri na anọ na nke iri na isii ya mere o nwere akụkụ nke Othdị Gothic Mudejar na onye ozo mbubreyo-gothic. N’akụkụ ya ka ị pụrụ ịhụ ụlọ ụka atọ. Ma n'ime ime ahụ ebe ịchụàjà dị elu, ọrụ nke ọkpụ ihe Francisco Villegas ebe obibi oyiyi ma mee na narị afọ nke iri na asaa.
Hermitage nke Nwanyị anyị nke Oliva
E wuru ya na foduru nke ụlọ nsọ ọzọ, n'okwu a bụ Visigoth hermitage. E wuru ya na narị afọ nke XNUMX ma pụta ìhè maka fawade ya na-acha ọcha, akụkụ nke ihe niile na obodo niile. Dị ka aha ya na-egosi, ọ nwere ụlọ a Osote nke Virgin nke Olive, onye nlekọta dị nsọ nke Véjer.
Ventlọ ebe obibi nke ndị na-eche echiche
Tọrọ ntọala na narị afọ nke XNUMX site n'aka Don Juan de Amaya dị ka ebe a na-eli ya na nwunye ya, ọ na-apụ apụ maka Renaissance façade, dome nke na-ekpu isi ebe ịchụàjà ya na crypts crypts ebe ndị guzobere ya. Ugbu a, ọ bụ isi ụlọ ọrụ nke Omenala na Omenala Vejer Vejer.
Ejikọtara ya na ụlọ elu nke otu aha ahụ anyị agwalarị gị, ọ bụ ụlọ manor wuru na narị afọ XNUMX. Nwere ike ịga ogige ya abụọ dị n'ime, mana buru n'uche na ọ bi na ya ọ ka mma ịrịọ ikike ka ịme ya.
Obí nke Marquis nke Tamarón
Ọ bụkwa ụlọ nke narị afọ nke XNUMX, mana na n'akụkụ Segur arch. Agbanyeghị, ọ na-enye gị mma ọzọ: ọ nwere ụlọ Akwụkwọ akụkọ Vejer History na Archaeology Museum. O nwere ime ụlọ iri na atọ, asatọ n'ime ha bụ maka ihe mgbe ochie a hụrụ na gburugburu obodo ahụ, ebe atọ bụ maka ọmarịcha nka.
Plaza de España, etiti akwara Vejer de la Frontera
Ọdịdị ya malitere na narị afọ nke XNUMX, mgbe obodo ahụ hapụrụ mgbidi mgbidi ya. Ugbua na narị afọ nke iri abụọ mara mma Sevillian taịl nile iyi. A makwaara ya dị ka "Plaza de los Pescaitos".
Ọ ga-adọta uche gị ịchọta ọtụtụ windmill na etiti obodo mepere emepe nke Vejer. N'ihi ike o nwere na mpaghara ahụ, ha sitere na ya Dị Carthaginian, siri ike karịa nke ahụkarị na La Mancha.
Ọwa mmiri nke Santa Lucia
Wuru na narị afọ nke XNUMX, ọ dị na Isi obodo ime obodo Santa Lucía, bụ ihe ncheta nke ihe okike maka ahịhịa ndụ ya, n'ihi mmiri dị ukwuu n'ógbè ahụ.
Gburugburu Vejer de la Frontera
Obodo Cadiz na-enyekwa gị ebe mara mma. Ọ bụ nke La Breña na Marismas del Barbate Natural Park, tinyere mpaghara ndị dị ka Ugwu Quebradas ma ọ bụ Peña Cortada, ndị e kwuru n’elu Isi obodo ime obodo Santa Lucía na La Muela mmiri.
Ma, ọ bụrụ na ịchọrọ n'ụsọ osimiri, Vejer na-enyekwa ya. Kpọmkwem abụọ, nke Mangueta, kwupụtara ebe echebe, na nke El Palmar, ebe ị nwekwara ike ịhụ ụlọ nche ochie nke ụsọ oké osimiri.
Kedu mgbe ọ ka mma ịga Vejer de la Frontera
Obodo Cadiz dị ihe dịka narị mita abụọ n’elu oke osimiri. Na-eweta a nwayọọ ihu igwe, na oge oyi na-atọ ụtọ ọ bụ ezie na mmiri na-ezo karịa oge ọkọchị. Maka akụkụ nke ha, ndị nke abụọ na-ekpo ọkụ mana ọ naghị anwụ anwụ.
Ke ofụri ofụri, ọ bụ nnọọ obi ụtọ ihu igwe. Naanị iwe ị nwere ike ịchọta bụ Ifufe Levante, nke na-efe oge ụfọdụ ruo ọtụtụ ụbọchị. N'ọnọdụ ọ bụla, oge kachasị mma maka ịga leta obodo ahụ bụ mmiri na udu mmiri. Na mgbakwunye, ememme ndị bụ isi nke Vejer na-ewere ọnọdụ n'oge ndị ahụ: a Mmiri ngosi na Anyasị nke Nwanyị Anyị nke Olive.
Otu esi aga Vejer de la Frontera
Obodo a dị ihe dị ka kilomita iri ise na ise site na Cádiz ihe dị ka otu narị na iri isii nke Sevilla. Site na obodo abuo ka inwere ụgbọ ala nkwụsị ahụ na Vejer. Ma, ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga njem n’ụgbọ ala nke gị, ụzọ ị ga-aga bụ nke a A-48 ma were ya ọpụpụ 36.
Osimiri El Palmar
Ọ bụrụ na ị gaa njem ọzọ, ị nwere ọdụ ụgbọelu en Jerez de la Frontera na ụgbọ elu na-aga Madrid na Barcelona. N'otu aka ahụ, ụgbọ okporo ígwè nwere ọdụ ọdụ Cádiz na nke aka ya Sherry.
Na mmechi, Vejer de la Frontera Ọ bụ ọmarịcha obodo ọcha na mpaghara Cádiz. Ọ na-enye gị ọmarịcha gburugburu ebe obibi na ọtụtụ ihe ncheta. Ọ bụrụ n ’ihe a niile ị gbakwunye agwa nwere ihu ọchị na nke enyi nke ndị ya, ị nwere ezi ihe mere ị ga-eji gaa leta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Vejer de la Frontera